Maah maahyo soomaaliyeed 1 amuur aadan laheen is gal galis aa wax looga cunaa 2. Aan wada hadalno waa aan heshiino. 3. Aar qoyey. Read story MAAHMAAHYO SOOMAALI AH by madarwacays with reads. Waxaad dhuuso moodaysaa, xaar kugu noqda. 1 Aadme la. MAAHMAAHYO SOOMAALIYEED OO KHALDAN: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ soomaalidu waa shacab afkooda ay ka buuxdo murti.
Author: Faekus Vom
Nin adoo buuka ka taaga Adoo bahaana ka tagaa Alaa barashadu wacanayeey. Mnsh alh aadban uga helay murtidan run ahaanti luqada somaligu waa mid ku hodan murtida. Maaaasha Allah Marka hore waad mhdsbthy Abdi salaan Marka xigta soomaapiyeed badan ayaan ka faa,iday runtoo. Sunday, March 29, MaahMaah. Saddex saddex lama heshiiso. Saddex buu raggu is dher yahay. Saddex baa la yidhi: Saddex baa rag u liita.
Saddex Ilaah waa karaa, mase suurtowdo: Saddex markaan bartaan ka gaboobay: Saddex wer-werkay kugu kordhiyaan: Saddex col baa jira. Saddex saddex loogama tago. Saddex la lama dego.
Saddex baa rag u wanagsan. Saddex saddex kama maahmaahyl. Saddex dumar laguma qabo. Saddex naagtaada kugu nacda.
Maah maahyo soomaaliyeed oo 70 gaaraayo – masiirkaa
Saddex saddex bay ka tagtaa. Saddex waligaa lama raaco. Saddex raga wuu ku cimri deg degga. Saddex dadka kugu naca.
Saddex tolkabaa kugu naca. Saddex saddex baa lagu kabaa. Saddex saddexba lagu cadeeya.
955 Maahmaahyo Oo Laga Soo Min Guurinay Qaamuuska Maahmaahyada Soomaaliyeed, Baro Oo Isticmaal!
Saddex waa loo gudaa. Saddex saddex looma tilmaamo. Saddex waa la raacaa. Saddex saddex lagama dayo. Saddex wad ku degtaa. Saddex mashmaahyo horimar lagu gaadha. Saddex ba dib u gocosho leh. Saddex baa suldaanka lagu eega. Saddex dumarku way neceb yihiin. Saddex bay naagi kugu disha.
Saddex nin midna la lama haasawe tago. Saddex waa lagu jabaa. Saddex ayaa dumarka ugu fiican. Saddex reer ma tarmaan. Saddex dumarku kuma wanagsan. Saddex ilaahay ba laga magan gala. Saddex ba madaxnimo ka qaada. Saddex saddex loogama maarmo.
Saddex waa laga tagaa. Saddex waa laga ducaytaa. Saddex waa lagu tarmaa. Saddex waa xarago adduunyo. Inkaarta maahmaanyo waa saddex. Saddex waa lagu hoogaa. Saddex ba aabaha laga dhaxlaa. Saddax waa lagu xamdiyaa. Nin saddex buu nin u yahay. Saddex weligaa haysku deyin. Saddex waa gar, saddexna waa gardarro, saddexna waa galabsigeed.
Posted by Eng Maahmmaahyo at 3: Unknown September 10, at 4: Diiriye Hode March 24, at 9: Unknown July 22, at 6: Unknown July 30, at 1: Unknown July 30, at 2: Cabdulaahi Cali August 5, at 4: Unknown August 19, at Unknown September 3, at Unknown September 21, at 3: Unknown October 8, at 3: Unknown October 29, at 6: Unknown November 15, at 2: Unknown December 17, maahmmaahyo Newer Post Older Post Home.